Udidekile ngendaba yendlu yomxhaso | News24
Udidekile ngendaba yendlu yomxhaso
Isithombe: Makhosandile ZuluUNkk Monco Ntombela
UDABA lwendlu yomxhaso kahulumeni eyakhelwe yena kodwa ekwenye indawo futhi ehlala abanye abantu limushiye edidekile uNkk Monco Ntombela wakwaZayeka eSweetwaters.
Uthe into emxakayo ukuthi ubengakaze athole umbiko wokuthi indlu seyakhiwe, yakhelwe kuphi nendawo nokuthi kumele ezongena kuyona noma umbiko wokuthi kumele kwenziwe isivumelwano phakathi kwakhe nabantu abahlali kulendlu uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu othi eyakhe.
“Asikho isivumelwano esenziwa nami kanti nabantu abahlala kulendlu umnyango ongitshela ukuthi eyami angibazi nabo abangazi,” kusho uNkk Ntombela. Uthe uzewathola ngonyaka odlule ukuthi kunendlu eyakhiwe kanti esegameni lakhe emuva kokulinda iminyaka ukuthi akhelwe indlu. UNkk Ntombela uthe eminyakeni eyedlule wafaka isicelo sokwakhelwa indlu yomxhaso kahulumeni esagunyazwa kodwa wahlala isikhathi eside kungekho okwenzekalayo ngokwakhiwa kwendlu. Uthe isicelo wasifaka kwaze kwaba kathathu kodwa kungekho indlu akhelwa yona.
“Ngonyaka odlule kufike isisebenzi sakwahulumeni sizobheka ukuthi ngabe bonke abantu basendaweni ababefake izicelo zezindlu sebakhelwa zona na. Isisebenzi lesi sithe uma sibhekela mina sisebenzisa inombolo yami kamazisi sathola ukuthi ikhona indlu eyakhelwe mina sasesithi angiye kuMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu edolobheni ukuze ngizothola imininingwane ngayo indlu le,” kusho yena.
Uqhube wathi emnyangweni wathola ukuthi kuyiqiniso ukuthi kukhona indlu akhelwe yona enenombolo yayo kodwa into eyindida kakhulu kuyena ukuthi ubengazi lutho ngayo indlu le. Uthe emnyangweni uthole ukuthi indlu yakhelwe e-Imbali kwa BB kanti ngokwemininingwane esemnyangweni lendlu isegameni lakhe. “Ngake ngazama ukuthola usizo kubaholi bomphakathi wendawo okwakhelwe khona indlu kodwa ngangathola muntu owakwazi ukungisiza babelokhu bethi angibuye ngesinye isikhathi ngagcina nami sengidikibele,” kusho uNkk Ntombela.
Uthe wagcina ezizamela ngendlela yakhe ukuthola ukuthi ngabe la izisebenzi zomnyango ezathi kwakhiwe khona indlu esegameni lakhe kungakuphi.
“Ngangifuna ukuthola ukuthi le nombolo yendlu kanye nayo indlu ngabe ngempela kukhona yini. Kodwa ngenkathi ngifika khona angingena ngaphakathi kodwa ngayibona indlu, yize ngingababonanga abantu abahlala khona kodwa zikhona izimpawu ezazitshengisa ukuthi kukhona abahlala ngaphakathi,” kusho yena.
Into ekhathaza uNkk Ntombela kakhulu ukuthi lendlu ahlala kuyona kumanje endaweni yakwaZayeka ayikho esimeni esihle njengoba inezindonga eziqhekekile kanti usaba ukuthi uma kungaba khona umoya ovunguza ngamandla noma izimvula ingavele ibhidlike. “Mina into esengiyifisa manje ukuthi ngakhelwe indlu la engihlezi khona kuyobe kuphelile ngobe nginenkinga yokuthi lendlu esihlala kuyona iyangiwela manje, njengoba kunetha nje ingangimbhoza nezingane noma yinini lendlu,” kusho yena.
UMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu ubungakayiphenduli imibuzo othunyelwe yona mayelana naloludaba ngesikhathi sokushicelela.